Dhaqan (Qaybtii 1aad)
Waxaa jirta in dadyowga adduunku ay laba arrimood ku kala duwanyihiin: mid dhaqan, iyo mid degaan.
Dhaqanku waxa u miisaan, martabo, milgo iyo maamuusba ku leeyhay bulshooyinka dunida dacaldeedoo dhan. In kastoo ay dadku dhaqamada ku kala faro adagyihiin, haddana ma jirto ummad amba bulsho dhammaan gebi ahaanteedba ka aradan, oo ka faro madhan oo mudug ah, oo mudh-iyo-gacan ka ah hidihii awowyaalkood.Way jirtaa inay bulshooyinka adduunka la jaan qadaan hadba wixii cusub ee ku soo kordha. Kaasoo kaga yimaadda kagana soo butaaca bulshooyin kale oo anay dhaqan iyo degaantoona hore uga dhexayn balse dantu is badday ama is dhexgal xagga ganacsiga iyo maamulku dhex maray. Waxa kaloo jirta sida aan dhammaanteenba la socono mid aan intaan midna ahayn oo ay sabatay ku-amar taaglayntii ka timid waayo hore ay quruumihii hore duulal kale ku duuleen, sidii ka dhacday qaybsigii Afrika. Taasoo ka dhalatay markay reer Yurub heleen inay farsamadii gacanta warshadeeyaan, ka dibna wax soo saarkoodii sare u kacay, dabadeedto ay u baahdeen meelo diihin oo ay kala soo baxaan allaabta qaaydhiin (raw material) iyo suuqyo cusub oo ay alaabta ay soo saaraan u iib geeyaan (consumers), oo ka xidhan suuqyada kale ee ay kula tartamayaan saaxiibadooda kale ee reer Yurub. Waa ta sabatay inay gugii 1884-kii ay xoogaggii Reer Yurub ku shiraan Beerliin (Berlin) dalka Jarmalka si ay u qaybsadaan Afrika iyo dalal kale oo addunka ka mid ah. Qoraalkani ma aha mid ka hadlayaa taariikh ama waxyaabihii la soo maray. Waxse u ku koobnaan doonaa 'dhaqan' oo ah sumad sooca qoraalkani.
Haddaba Soomaalidu meel ay joogtaba waxay ka mid tahay dadyowga ay si aad ah u saamsay duruufaha wax dhaqan geddiya ee waayo hore iyo imikaba kaga soo burqanaya dadyowga kale ee ay mucaamiladu ka dhaxayso ama ay isku degaan dhawyihiin. Dadyowga kale een soomaalida ahayn oo ka xadaarad fac weyn soomaalida, sida Carabta oo raad weyn ku reebtay dhaqanka soomaalida. Heer ay labada dhaqan, waa ka carabta iyo ka soomaalidee isku dhex milmaan oo aan lagala garan karin mararka qaarkood.
Af Soomaaliga iyo Af Carabiga
Waabaa waxaan waydiiyay dhawr nin oo dhalin yaro ah inay ii sheegaan bal seddexda eray ee u dhigma qureec, qado iyo casho af soomaliga oo ah afkeena hooyo. Waxay igu jawaabeen, waa sidaasuun waxba isma badalayaan. Midbaase gartay, wuxuu ahaa nin dhaqankiisa ku faro adag oo dhiiran. Intii kale markaan u sheegay, waxay igu yidhaahdeen: “ af soomaaligaa halkee lagaga hadlaa ma Gabiley? Iyagoo ii quusinaya waa lahjad Gabiley lagaga hadlo,maadaama aan ka soo jeedo degaankaas iyaguna isku arkayeen inay ka soo jeedaan degaanka Hargeysa. Dhacdaaadsii aadbay ii taabatay. Waxaan is waydiiyay intay Gabiley iyo Hargeysa isku jiraan? Ma waxay Isku jiraan xagga dhererka dhul ahaaneed heer ay afka ku kala durkaan, oo la is af garan waayo? Waxa waaydiimahaa iiga soo baxay inayna degaanka ku xidhnayn ee ay dadka wax badan oo afkeena ahi ka sii lumayaan maalinba maalinta ka danbaysa. Oo facba faca uu ka da’ yaryahay af soomaaligu ku sii yaraanayo.Haddaan haatan loo gurman oo aan gacan wax tar leh laga gaysan ay adkaandoonto in dib loo soo nooleeyo. Midse ogsoonow in af dhintay dib loosoo noolayn karo, sida Israel oo kale. Afookii cibriga (Hebrew) ahaa oo haylaamo yayari ka sii noolyihiin ayay dib u kiciyeen, oo ay dib u nooleeyeen. Balse iyaga waxa caawisay dhawr kun oo sano ka hor, waa xiliyadii nebi Muuse e ayaa la sii qoray afkooda oo wuu qornaa.Waxa kaliya ee ay sameeyeen inay dadka dib u baraan.
Seddexda eray ee aynnu dhammaanteen wada naqaan waa af carabi la soomaaliyeeyay. Seddexda eray waa sidan hoos ku xardhan:
Qureec: Al-quraac ( waa suuqdi ka yimid lahajadda lagaga hadlo dalka Yemen ). Haddii al-qurca la yidhaa waa eray ku jira af carabiga naxwaha ah. Waa walax ama shay la bakhtiyaa-nasiib rogo sida : ‘wheel of fortune’ oo kale ).
Qado : Al-qidaa ( waa af carabi asal ah [luqa carabiya fusxa])
Casho : Al-cishaa ( waa af carabi asal ah [luqa carabiya fusxa])
Seddexdaa eray waxay suuqa af soomaaliga ka saareen oo ay hadhuudhlaha ku dareen waayo hore oon dhawayn, seddex eray oo af soomaali ah balse tol u gurmada waayay. Seddexda eray ee u dhigma seddexdan eray een kor ku xusnay waa:
Afur = qureec
Hadhimo = qado
Xiraad = casho
Sidaa si leeg erayada:
‘ fool ‘, waxa badalkiisii galay ‘waji’.
‘ walax ‘, waxa badalkiisii galay ‘ shay ‘.
‘ Eebbe , Waaq ‘ , waxa badalkoodii galay ‘ Allaah’.
‘ Baxsi ‘ waxa badalkiisii galay ‘ tahriib ‘.
‘ Xash ‘ marka la xashayo qooshka, waxa badalkiisii galay “ cajiin, oo ka yimid tacjiin al khubz “.
‘ Cunno ama wax la calfado’, waxa badalay ‘quut oo isku rogay quud ama arsaaq oo ka yimd al- arzaaq’.
‘ socdaal ama qayaad ‘, waxa badalkoodii galay ‘ safar ’.
‘ aqoon ’, waxa badalkiisii galay “ tacliin, oo ka yimid tacliim”.
‘ Hadhgal (hadh-gal)’, waxa badalay halkiisii ‘ duhur ’
‘ hiraab ’, waxa galay halkiisii oo badalay ‘ suxuur ’
‘ amin ‘, waxa badalkiisii galay “ waqti ”.
‘ goor ’ sida ku jirta: goortaan is argnay, waxa badlikiisii galay ‘ saacad ’.
' waydiin ' waxa badalkiisii galay ' su'aal '.
' fal celin ', waxa badalkiisii galay ' jawaab '.
' guur ' , waxa badalkiisii galay ' aroos ' , oo ka yimid erayga carabiga ah ee ' caruus ', dabeetana la soomaaliyay oo isku rogay ' aroos '.
' xaasid ' , waa eray carabiya, waana ' xaasid ', ka yimid ' xasada '. Labada eray ee af soomaali ahaan ugu dhaway waxay noqonayaan: ka xun, sida ku jirta:
Wacays wuxuu ka xunyahay raganimada iyo kartida Rooble, Eebbbe ku manaystay.
Weedhaa xagga sare ku xusan, haddii eraygii carabiga ahaa lagu badalo dhigiisa soomaaliga ah odhaahdu waxay u dhacaysaa sidan hoos ku xardhan:
Wacays wuxuu xaasidayaa raganimada iyo kartida Rooble, Eebbe ku manaystay. Dadka qaar meesha ' xaasidayaa '-da waxay ku badalaan ' xistiyayaa ',
Sida ku jirta gabaygii Salaan Carrabay ee u lahaa:
Waxba yaanu xeerkay imarin, xoolana isiine
Xaashee lilee nin libin kaa xistiyay xumihii waa yaabe
Waxayna ku xidhantahay degaanka u qofkaasi ka soo jeedo. Waa isla eraygii carabiga ahaa oo la lahjadeeyay.
Waxaanse rabnaa hal eray oo kaliyoo u dhigma.Wuu jiray jiray kolay balse maanta lama hayo. Wuxuu ka mid yahay erayada dabar go'ay. Lama hayo eraygii uu erayga ' xaasid ' hulada ka saaray ee u hadhuudhlaha ku daray ilaa imika.
‘ ma ’, sida ku jirta: ma arag, ma maqal, af carabigana isla sidaasuuna, sida ku jirta ‘ maa ra’eytu’, ‘ maa samictu’. Ilaa maantadaa ma hayo eraygii meesha ka baxay waxaan raadinayay ilaa todbaadanaadkii ilaa imika [waa eraygaasuune kuwa kale kuma jiraan] Waa ‘maa’dii af carabiga ku jirtay oo la soomaliyeeyay, erayga aynu dhammaanteen adeegsanaa. Sida eraygaasiba shaandhada uga siibtay ee ilaa iminka cid haysaa anay jirin ayaa kuwa badan u dun-go’ayaan haddaan loo gurmanin.
Erayada wali la daalaa-dhacaaya een is dhiibin:
Aroor = subax (waa af carabi , ka yimid erayga sabaax)
Galin danbe = casar ( waa af carabi ), casar dheer, casar gaaban
Xafiiska socdaalka = xafiiska jawaasaadka ( ka yimid eray: jawaaz, wadartiisuna tahay jawaazaat)
Gegada dayuuradaha = madaarka
Eray = kalima (waa carabi ), erayga = kalmadda (waa carabi la soomaaliyeeyay oo ka yimid, kalima).
Cir = samo (asamaa).
Hu' ama dhar = labis ( waa carabi, ka yimid erayga masdarkiisu yahay:al-labs, wadartuusuna noqonayso al-libaas).Intani waa tusaale kooban. Intaa kuma idla, birna kuma goynine, waan yara dulxaadiyay.
Haddaba ma ba’na in afafka la kala qaataa, oo af ingriisigan aad argteen ee addunyada maaruqay, ee meeshaad martaba soo mutuxanba, eed moodid inuu tigaad muruqle daaqayba, afaf aan asalkoodu af Ingiriisi ahaynbaa ka buuxa.Bulshada u dhalatay af Ingirisigu waxay dhaqan u leeyihiin in ay erayada aan afkooda ku jirin ee afafka qalaad ah ku soo daraan afkooda, balse kii hore jirayna ay sii xoojiyaan. Oo ay labadu is biirsadaan si afku u kobco. Ee sida soomaalida eraygii horee jiray eray kale oo qalaad kuma badlaan, oo koogii horee soo jireenka ahaana iskama tuuraan. Waxaa xataa ku jira af Ingiriisga eray asalkiisu yahay af soomaali oo ay inaga ergisteen, balse ay af ingirisiyeeyeen, waana kan hoos ku xardhan:
Gerenuk (eng) = garanuug (laga yaabaa inuu eraygu ka unkamay geri-nuug, tii geriga nuugaysay waayo sibay u qoor dheertay sida geriga oo kale), waa deero luqun dheer leh waxa kaliya oo ay ku nooshay Geeska Afrika waa; Somaliland, Somalia, Djibouti, Kenya iyo Ethiopia.
Daqanka iyo Diinta
Waxa quman inay dadka soomaaliyeed kala gartaan wixii dhaqan ah iyo wixii diin ah. Yoolkaasi, waa dhaqanka iyo diintee waa barta igu kaliftay inaan qalinka iyo warqadda isa saaro.Waa tabashada aan burashadda u biyaystay. Waa hawl qalbigayga ku dhex qabyo ahayd amin aad u dheer, taniyo todobaataankii illaa haddadaa aan joogno. Waa meesha markaan xasuustaba, haddaan hurdo hurdada ka salalo. Haddaan tukanayona saladda ka sahwiyo. Waxa iigu yaabka badanayd waa aan fasax u tegay dalka Ingiriiska ayaa dadkii aanu halkaa isku baranay nin ka mid ah, maalin woxogaa wada sheekaysanay. Waxaan, anigu qof ahaan soo bandhigay halista uu af soomaaligu daaqayo,iyo sidaan cid u miciinta anu u lahayn, ee u maalinba maalinta ka dabmbaysa sii gabaabsiyayo. Halkaan wax kale ka eegaayay ayuu iigu jawaaba, “ haddaan karayo af soomaliga gabigiisaba inta aan ka aqaan, af carabi baan ku doorsan lahaa”. Yaab iyo amakaak! Waa maalintaan is arkay anoo sare intaan u qaylyay leh: “Alliyo nebiiii! Dhulkow hanala ciirin, hana nagu cabaadin. Ilaahoow riyo iiga dhig!” Qori dhidban oo soo mutaxan uunbaanan noqon maalintaa. Haddaan dudomo ama haadaan ahaan lahaa maalintaa, waan ciiiri lahaa baan u malayn. Ninkaa waxa sidaa ka yeelsiiyay diin jacayl. Jacayl uu diinta Islaamka u qabo awgeed, heer uu gaadhay inuu ku taamo inuu afkiisii hooyo dabar gooyo, hadday u suuroobayso. “ Oo muxuu itarayaa [af soomaaligu]”, ayuu ka daba keenay markuu arkay sidaan u anfariiray, “ ifiyo aakhirotoona ima anfacayee”. Eebbow adoonkaa u danbi dhaaf oo u naxariiso. Adoon afkaaga iyo dhaqankaa midnaba badalin miyaanad Eebbe beryi karin? Miyaanad cibaadaysan karin? Miyaanad intii lagu faray gudan karin? Waliba adoo kuwii u dhashay af carabiga khayraadka iyo wanaagga suuban uga badinaya kana dheeraynaya, siduu Bilaalba yeelay, ee Salmaan Al Faarisiba yeelay, ee u Suhayb Arruumiyiba yeelay, Allaahu Akbar! Dhammantood Eebbe ha ka raali ahaado. Kalidii ma aha inta inaga midka ah ee sidaa u fikirtaa. Waxaan interentka ku arkay rag kale oo iyaguna sidaa soo kale ku taamaya.
Arrimaha sidan oo kale ah, isku qaska jacaylka diinta iyo jacaylka dhaqanka Carabta iyo afkoogaba, ma aha markii u horaysay ee ay ka dhacdo dunida. Horay arrimahan oo kale u dhaceen. Sida taariikhda lagu hayo gacan ku dhigistii dalka Masar, maalintay muslimiintu ku gulaysteen ee gacanta ku dhigeen, tiradooda ciidan ahaan waxay dhammayd 500 oo nin. Waxa maalintaa hokaaminayay muslimiintii Masar gacanta ku dhigtay, Camra Bin Caas,oo waaligii u horeeyay ee muslim ah ka noqday Masar. Waxa kaloon ogsoonahay inay Masar tahay dalka xagga tirada dadka ugu faro badan dalalka Carbeed oo idil. Is waydiintu waxay tahay ma shantii boqol ee nin ee ka yimid Jaziiratul Carab ayaa tarankoodii ka tiro batay dadkii waligoodba ku noola Masar taniyo Faraaciinadii iyo intii kaloo dhan ee lagaga yimid dhulkii carbeed ee waqtigaasi?
Fal celintu (jawaabtu) waxay tahay maya. Dadkii dhulka loogu yimid, waa Masaariye, ayaa diintii, dhaqankii iyo afkiiba qaatay. Iyagoo daadshay dhaqamadii, afkoodii iyo caadooyinkoogiiba. Waxayna noqdeen Al carab Al Mustacraba, Carabta la Carabeeyay, marka laga reebo in tiro yar oo lagu qiyaaso 20% oo wali ku dhegsan diintoodii, afkoodii iyo caadooyinkogoodii oo la yidhaa Qibdiyiin Al Misr (The Egyptian Copts). Masar oo qudha maahee arrintaasii waxay kaloo ay ka dhacday; Liibiya, Marooko (Maqrib), Aljeeriya (Aljazaa’ir), Tuniisiya, Suudaan, Muritaaniya iyo dalal kaloo badan. Waxana lagu xusaa xagga taariikhda inay yihiin Carabtii la carabeeyay (Al Carab Al Mustacraba).
Adiga kuma ogi waxaad yeeli, balse anigu maanta gadahaa aan joogo in la i carabeeyo ama aan aniguba is dhaqan dooriyo igama suurowdo. Diintayda waan hasyanayaa, hiddahayga waan ku jeeni qaaranayaa. Dhaqankayga waan ku laafyoonayaa. Afkayga waan ku gabyayaa oon ku geeraarayaa, oon ku goohayaa, oon ku gunuunuxayaa haddaan doono. Caadooyinkaygana (intii wanaagsan een hayb takoor, hayb sooc, dir sooc iyo diin ka carar lahayn) calanbaan dul sudhayaa oo sida gamaan la shirabaan u gaangaanbinayaa. Hiddahayga waan haysanaya. Iskama xuurayo. Haa, waan haysanayaa, waanan u han waynahay. Waxaan ku taamayaa hadday tayda noqoto inaan af soomaliga ku faafiyo dunida dacaladeeda sida dadyowga kaleba yeeleen ee afafkooda ku faafiyeen dunida dafaheeda.
Akhristow cilmigu ma aha oo kaliya afafka qalaad intaad si fiican u baratid aad ku talax tagtid dabeeto afkaaga hooyo hoos u eegto, daymo quudhsi leh! Waxaan ogahay mareego ay dad soomaaliyeed yagleeleen, tifaftiraan, maamulaan oo haddana ka mamnuucay kana yaqyaqsooda inay qoraalada af soomaliga ku qorani mareegahooda ku soo tebiyaan! Waa arrin lala yaabo. Waa dhaawac inagu maqan, Waa dhoohanaan waliba isla wayniyi ku dheehantahay. Waa dhabano hays iyo dhabar jab dhuuxa ka habaya. Waa daba dhilifnimo dhaqan shisheeye. Waa dhalinteenoon la dhaxal tiraayo, ilayn afka iyo dhaqanku waa dhaxal ay awooyaasheen inooga tageene. Waa qoraalka af soomaligoo si aanu u gaamurin, una taabo galin la curdan dhadhinaayo.Waa dhegxumo weyn oo aan laga dhuuman karin. Waa dhalaan habaabis nin raacay oo dhaxanta meeraaya. Waa dhuxul dambas huwan u baahan in laga foojignaado. Waa dhegar laga galay dhaqankeenna. Aaan u aarnee qalin ku wayteeya. Weedhaha waraabuhu raqayo weerax la ogaada. Wadaad iyo waranleba foojigo ogaada.
Waxaa soo scoda, haddii Eebbe idmo, qaybo kale oo ah: Dhaqan Labaad iyo Dhaqan Seddexaad oo dhamays tiri doona qoraalkan: Dhaqan